‘गरिबलाई कहिल्यै रोग नलागोस्’ – Sthaniya Patra
‘गरिबलाई कहिल्यै रोग नलागोस्’
By स्थानीय पत्र Last updated Apr 28, 2022
१५ वैशाख, काठमाडौं । सुजाता सुब्बाले इलाम चुरेघाँटीमा सानो होटल चलाएकी थिइन् । उनका श्रीमान् मदनकुमार राई स्कुल बस चलाउँथे । फुर्सदको क्षणमा उनी होटलमा काम सघाउँथे । दुई छोराछोरीसहित उनीहरुको लागि सामान्य खर्च जोहो हुन्थ्यो । यसरी नै जेनतेन जीवन चलेको थियो ।
त्यहाँ थप उपचार गरियो । औषधिपानी गरियो । अस्पतालकै दौडधूपमा दिनहरु बित्न थाले । एकातिर श्रीमान् बिरामी, अर्कोतिर आर्थिक अवस्था कमजोर । आयआर्जनको मेलो हरायो । बालबच्चा कसरी स्यहारसुसार गर्ने ? कसरी घरखर्च जुटाउने ? यो भन्दा पनि ठूलो चिन्ता थपियो, श्रीमानको उपचार । उपचार कहाँ गर्ने, खर्च कसरी जुटाउने ?
…अनि पहाड खस्यो
अब के गर्ने, कहाँ लाने ? उनीहरुले भेउ पाएनन् । आखिरमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याए । त्यहाँ पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य जाँच गरियो । ‘त्यतिका अस्पताल पुर्‍याइयो, त्यतिका पैसा खर्च गरियो,’ सुजाताले सुनाइन्, ‘तर घाउ निको नै भएन ।’ रोगी श्रीमानलाई लिएर अस्पतालको चक्कर लगाउनुपर्दा घरबार बिथोलियो । अस्पतालमै रातहरु बित्न थाले । बालबच्चा के गर्दै होलान् ? सर्वत्र चिन्ताले छोप्न थाल्यो । यद्यपि, जस्तोसुकै दुःखकष्ट खेपेर पनि श्रीमानलाई निको बनाउँछु भन्ने प्रण गरिन् । श्रीमानको घाउ निको भएपछि पूर्ववत् जीवनको लय फेरिनेछ, घर–व्यवहार सोझिनेछ । उनले यस्तै सोचिन् ।
अब के गर्ने ? उनीहरुसँग उपाय थिएन । त्यस अस्पतालमा क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्न उपकरण नभएको बताइयो । उनीहरुको मन त्यसै भारी भयो । अस्पताल धाउँदा धाउँदा घरबार बिग्रिसक्यो, उपचार गर्दागर्दा ऋणको भार बढिसक्यो ।
दुर्लभ उपचार !
अस्पताल धाउँदा धाउँदा यसै हैरान भइसकेका थिए । अब उपचारको लागि अस्पताल खोज्नुपर्ने अर्को चुनौती थपियो । कहिलेसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने हो ? रोग निको हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै टुंगो छैन । अनि टुंगो छैन, कहाँबाट यत्तिका खर्च जुटाउने ?
ऋण खोज्दै कहिलेसम्म उपचार गर्ने ?
लाउँलाउँ खाउँखाउँ भन्ने उमेरमा क्यान्सर होला भन्ने सोचेकै थिएनन् मदनले । घरको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण हरेस खाइसकेका थिए । तर सुजाताले हरेक पल उनलाई थमथमाउँदै ढाडस दिइरहन्छिन्, ‘जसरी पनि म बचाउँछु ।’ onlinekhabar
प्रचण्ड – माधव समूहको तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेर कल्याणकारी बन्न…
दोहोरो चरित्रले विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा सकस